Oge na-adịghị anya gara aga, atụmatụ SEO dịkarịsịrị mkpa na isiokwu. Keywords bụ ihe dị mkpa iji chọpụta arụmọrụ nke mkpọsa. Ndị na-ewu weebụsaịtị ga-eji isiokwu jupụta saịtị ahụ, ndị ahịa ahụ ga-ahụkwa nsonaazụ ya. Nsonaazụ ahụ, gosipụtara foto dị iche. Ọ bụrụ na nkuzi SEO gị maka ndị mbido gụnyere iji ngwa Google iji chọpụta isi okwu wee tinye ha na weebụsaịtị oge niile, ọ nwere ike ịga
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eji otu teknụzụ eme ihe masịrị ha ma ọ bụ nwee ntụsara ahụ ma leghara ndị ọzọ anya. Abụ m nnukwu onye na-akwado akpaaka na ndị na-ere ahịa na-ebugharị ozi ha n'ụzọ ọ bụla, ọdịdị, ma ọ bụ ụdị - ka ọ ghara imerụ mbọ ahịa ha. Banyere ụlọ ọrụ na-ebugharị ọdịnaya site na saịtị ya, edemede, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ ọmụmụ ma ọ bụ blọọgụ ya, ekwenyere m na enwere igodo atọ iji mee gị